Gịnị ka Jizọs bu n'uche mgbe ọ sịrị "nọgidenụ n'ime m"? | EKPERE NA OZI
Gịnị ka Jizọs bu n'uche mgbe ọ sịrị "nọgidenụ n'ime m"?
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 4, 2020 Ọktoba 4, 2020
“Ọ bụrụ na unu anọgide n’ime m, okwu m na-adịgidekwa n’ime ụnụ, jụọ ihe ị chọrọ, a ga-emere gị ya” (Jọn 15: 7).
Iji ụdị amaokwu amaokwu dị mkpa dị otu a, gịnị na-agbata m n'uche ozugbo ma olile anya nke gị kwa, ọ bụ maka gịnị? Gịnị kpatara amaokwu a, "ọ bụrụ na ị na-ebibe m, okwu m na-anọdụkwa n'ime gị," dị mkpa? E nwere ihe abụọ dị mkpa mere anyị ga-eji jụọ ajụjụ a.
1. Ike ndụ
Dịka onye kwere ekwe, Kraịst bụ isi mmalite gị. Enweghị nzọpụta na-enweghị Kraịst, ọ nweghịkwa ndụ Ndị Kraịst na-enweghị Kraịst. Na mbụ n'isiakwụkwọ a (Jọn 15: 5) Jizọs n'onwe ya kwuru "na-enweghị m ị nweghị ike ime ihe ọ bụla." Yabụ iji bie ndụ bara uru, ịchọrọ enyemaka karịrị onwe gị ma ọ bụ ikike gị. Nweta enyemaka ahụ mgbe ị nọgidere na Kristi.
2. Ike ịgbanwe
Akụkụ nke abụọ nke amaokwu ahụ, "Okwu m na-adịgide n'ime gị," na-egosi ịdị mkpa nke okwu Chineke. tinye okwu Chineke n’ọrụ, were okwu nke Chineke na akuzi, Chineke n’eji okwu ahu gbanwee ụzọ ikwere, otu ị n’echiche, na n’ikpeazụ, otu ị si eme ma ọ bụ ibi ndu.
Youchọrọ ibi ndụ gbanwere nke na-anọchite anya Jizọs nke ọma n'ụwa a? Ime nke a, ị ga- anọgide n’ime ya, ka okwu ya nọgidekwa n’ime gị.
Gịnị ka amaokwu a pụtara?
Remainnọgide pụtara ịnọ ma ọ bụ nọgide. Ihe o putara abughi na nke a bu ihe omume oge ufodu, kama na obu ihe n’aga n’ihu. Chee echiche banyere ọkụ eletrik ọ bụla ị nwere n’ụlọ. Ka ihe ahụ wee rụọ ọrụ nke ọma, ọ ga-ejikọrịrị na isi iyi ike. Dị ka nnukwu ma mara ihe dị ka ngwaọrụ ahụ dị, ọ bụrụ na enweghị ike ọ gaghị arụ ọrụ.
Mụ na gị bụ otu. Dika emere gi egwu ma di nma dika i mere, ipughi ime ihe nke Chineke ma oburu na ejikoro gi na isi iyi nke ike.
Jizọs kpọrọ gị ka ị nọrọ ma ọ bụ nọgide na ya ka okwu ya wee biri ma ọ bụ nọgide na-eme gị: ihe abụọ ahụ nwere njikọ. I nweghi ike idenogide n'ime Kraist na-ejighi okwu ya ma i nweghi ike nogidere okwu ya ma nogide na Kraist Otu na-eri nri na ibe ya. N'otu aka ahụ, akụrụngwa enweghị ike ịrụ ọrụ na-ejikọghị na eriri igwe. Ọzọkwa, ngwa ahụ enweghị ike ịjụ ịrụ ọrụ ọbụlagodi mgbe ejikọrọ ya na ike ọkọnọ. Ha abụọ na-arụkọ ọrụ ma na-emekọ ihe ọnụ.
Olee otu Okwu si na-anogide anyi?
Ka anyị kwụsịtụrụ n’akụkụ amaokwu a na ihe mere o ji dị mkpa. “Ọ bụrụ na unu anọgide n’ime m, okwu m ga-adịgidekwa n’ime gị. “Olee otú okwu Chineke si adịgide n’ime unu? Azịza ya bụ eleghị anya ihe ị maraworị. Dika ndi mmadu n’agbalisi ike isi n’ihe di na mbu bia, ha g’esi ike njo gi n’iso Chineke. Lee otua esi eme nke a:
Guo, tụgharịa uche, buo, rube isi.
Joshua 1: 8 kwuru, sị: “Debe akwụkwọ Iwu a mgbe niile n’egbugbere ọnụ gị; Na-atụgharị uche na ya ehihie na abalị, na-elezi anya na-eme ihe niile e dere ebe ahụ. Mgbe ahụ ị ga-enwe ọgaranya na nke ọma. "
Enwere ike iguta okwu Chineke: Enwere ike site n’itughari okwu Chineke, nwee ike n’iburu okwu Chineke n’isi, mee elu mee ala, irube isi n’okwu Chineke. bu na mgbe inogidere na Jisos, o n’enye gi ijeghari na irube isi n’okwu ya.
Kedu ihe gbara John 15 gburugburu?
Akụkụ a nke John 15 bụ akụkụ nke okwu toro ogologo nke malitere na John 13. Tụlee John 13: 1:
“Ọ bụ tupu ụbọchị Ista eruo. Jizọs maara na oge eruola ka ọ hapụ ụwa a lakwuru Nna ya. Ebe ọ hụrụ ndị nke ya nọ n’ụwa n’anya, ọ hụrụ ha n’anya ruo n’ọgwụgwụ “.
Site ugbu a gaa n'ihu, site na Jọn 17, Jizọs gara n'ihu inye ndị na-eso ụzọ ya ntụziaka ikpeazụ. N’ịmara na oge ahụ dị nso, ọ dị ka a ga-asị na ọ chọrọ ichetara ha ihe ndị kasị mkpa icheta mgbe ọ na-anọghị ebe a.
Chee echiche banyere onye na-arịa ọrịa na-anaghị ala ala naanị ụbọchị ole na ole ka ọ dịrị ndụ ma gị na ya akparịta ụka gbasara ihe dị mkpa na ihe ị kwesịrị ilekwasị anya. Okwu ndị ahụ nwere ike ịbara gị uru nke ukwuu. Ndị a bụ ndụmọdụ na agbamume kachasị ọhụrụ Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya, ya mere, mee ka ọ dị mkpa karịa. "Ọ bụrụ na ị nọgide n'ime m, ọ bụrụkwa na okwu m na-anọgide n'ime gị" abụghị obere okwu n'oge ahụ, ma ha abụghị okwu ọkụ ugbu a.
Gini ka amaokwu ndi ozo putara?
Ruo ugbu a, anyị elekwasịla anya na akụkụ nke mbụ, mana enwere akụkụ nke abụọ nke amaokwu a ma anyị kwesịrị ịtụle ihe kpatara ya.
"Ọ bụrụ na ị nọgide n'ime m, okwu m ga-adịgidekwa n'ime gị, rịọ maka ihe ị chọrọ, a ga-emere gị ya
Chere obere oge: Jizọs kwuru na anyị nwere ike ịrịọ maka ihe anyị chọrọ ma a ga-eme ya? Read gụrụ ya n'ụzọ ziri ezi, mana ọ chọrọ ụfọdụ onodu. Nke a bụ ihe atụ ọzọ nke eziokwu ndị a ejikọtara ọnụ. Ọ bụrụ n’iche n’ezie, nke a bụ nkwupụta dị ịtụnanya, yabụ ka anyị ghọta etu o si arụ ọrụ.
Dị ka anyị tụlere na mbụ, mgbe ịnọ na Kraịst nke a bụ isi iyi nke ike gị ịdị ndụ. Mgbe okwu Chineke nọgidere n’ime gị, nke a bụ ihe Chineke ji agbanwe ndụ gị na ụzọ iche echiche gị. Mgbe ihe abụọ a na-arụ ọrụ nke ọma na nke ọma na ndụ gị, mgbe ahụ i nwere ike ịrịọ maka ihe ịchọrọ n'ihi na ọ ga-adị n'usoro Kraist n'ime gị na okwu Chineke n'ime gị.
Amaokwu a na-akwado ozioma ọganihu?
Amaokwu a anaghị arụ ọrụ ma lee ihe kpatara ya. Chineke anaghị aza ekpere ndị na-esite n'echiche na-ezighị ezi, nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị ma ọ bụ nke anyaukwu. Tụlee amaokwu ndị a na Jemes:
“Gini kpatara esemokwu na esemokwu n’etiti unu? Ọ bụ na ha esiteghị n’ọchịchọ ọjọọ nke na-alụ agha n’ime gị? Chọrọ ihe ị nweghị, yabụ ị na-akpa nkata ma gbuo mmadụ inweta ya. Na-ekwo ekworo maka ihe ndị ọzọ nwere, mana ị nweghị ike inweta ya, yabụ ị na-alụ ọgụ ma na-ebu agha iji wepụ ya n’aka ha. Ma i nweghi ihe ị choro nihi na ịjughi Chukwu: ma mgbe ị na aju, youghọtaghi ihe kpatara ebum n’uche gị nile ji di njo: naanị ihe ị chọrọ bụ ihe ga-atọ gị ụtọ ”(Jemes 4: 1-3).
N'ihe banyere Chineke ịza ekpere gị, ihe kpatara ya. Ka m kwuwa: Ọ dịghị nsogbu Chineke na-agọzi ndị mmadụ, n'ezie ọ na-enwe mmasị ịme ya. Nsogbu na-ebilite mgbe ndị mmadụ nwere mmasị karị n’inweta ngọzi, n’achọghị onye na-agọzi.
Rịba ama usoro nke ihe na John 15: 7. Tupu ị jụọ, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịnọ na Kraịst ebe ọ ga - abụ isi mmalite gị. Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ka okwu ya nọrọ n’ime gị ebe ị kwụ otu ị kwenyere, otu isi eche echiche na etu i si ebi ndụ na ihe ọ chọrọ. Mgbe ị gbanwere ndụ gị n'ụzọ dị otu a, ekpere gị ga-agbanwe. Ha ga-ekwekọ na ọchịchọ ya n'ihi na ị kwadoro onwe gị na Jizọs na okwu ya. Mgbe nke ahụ mere, Chineke ga-aza ekpere gị n'ihi na ha ga-ekwekọ n'ihe ọ chọrọ ime na ndụ gị.
“Nke a bụ obi ike anyị nwere ịbịaru Chineke nso: na ọ bụrụ na anyị arịọ ihe dị ka uche ya si dị, ọ na-ege anyị ntị. Ọ bụrụ kwa na anyị matara na ọ na-ege anyị ntị, ihe ọbụla anyị rịọrọ, anyị maara na anyị nwere ihe anyị rịọrọ n’aka ya ”(1 Jọn 5: 14-15).
Mgbe ị nọ n’ime Kraist na okwu Kraist dị n’ime gị, ị ga-ekpe ekpere dịka uche Chineke si dị, mgbe ekpere gị dabara n’ihe Chineke chọrọ ime, ị ga-ejide n’aka na ị ga-enweta ihe ị rịọrọ. Agbanyeghị, ị ga - erita ebe a naanị ịnọ n'ime Ya na okwu ya site na ịnọnye n'ime gị.
Gịnị ka amaokwu a pụtara maka ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị?
O nwere okwu amaokwu a na-ekwu maka ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị. Okwu ahụ bụ mkpụrụ osisi. Tụlee amaokwu ndị mbụ a na Jọn 15:
Nọgidenụ n'ime m, ka mụ onwe m nọgidekwa n'ime unu. Alaka ọ bụla enweghị ike ịmị mkpụrụ naanị ya; ọ ga-adịgide n’osisi vaịn ahụ. I nweghi ike ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na ịnọghị n’ebe m nọ. Abụ m osisi vaịn ahụ; unu bụ alaka. Ọ bụrụ na unu anọgide n’ime m, m na gị, ị ga-amị mkpụrụ dị ukwuu; ewezuga m, ị pụghị ime ihe ọbụla ”(Jọn 15: 4-5).
Ọ dị ezigbo mfe ma n'otu oge ahụ ọ na-efu ụzọ dị mfe. Jụọ onwe gị ajụjụ a: you chọrọ ịmị mkpụrụ dị ukwuu maka Alaeze Chineke? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, ọ bụ naanị otu ụzọ isi mee ya, ịkwesịrị ịnọ na osisi vaịn ahụ. Enweghị ụzọ ọzọ. Ka ị na-ejikọ ma kegide gị na Jizọs, otú ahụ ka ị na-ejikọ okwu ya na ndụ gị na ọtụtụ mkpụrụ ị ga-amị. N'ikwu eziokwu, ị gaghị enwe ike inyere ya aka n'ihi na ọ ga-abụ nsonaazụ sitere na njikọ. Ndị ọzọ fọdụrụ, njikọta ọzọ, mkpụrụ ndị ọzọ. Ọ dị mfe.
Alụ ọgụ ka ị nọrọ n’ime ya
Mmeri nọ na ịnọ. Ngọzi bụ ịnọ. Mmepụta na mkpụrụ osisi dị na nke fọdụrụnụ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe ịma aka nke ịnọ. Ezie na irubere Kraist na okwu ya inogide nime gi di mfe nghota, mgbe ufodu kariri ka odi nkpa. Ọ bụ ya mere ị ga-eji lụọ ọgụ maka ya.
A ga-enwe ọtụtụ ihe ga - emegharị gị anya wee mee ka ị ghara ịnọ ebe ị nọ. Ga-eguzogide ha ma gbalịsie ike ịnọrọ. Cheta na n'èzí osisi vaịn enweghị ike, enweghị nrụpụta na enweghị mkpụrụ. Taa, m na-agba gị ume ime ihe ọ bụla iji mee ka gị na Kraịst na okwu ya nwee mmekọrịta. Nke a nwere ike ịchọ ka ị pụọ na ihe ndị ọzọ, mana echere m na ị ga-ekwenye na mkpụrụ ị ga-amị na ndụ ị ga-ebi ga-eme ka ịchụ-aja ahụ baa uru ya niile.
Nke gara aga Post Gara aga post:St. Francis na ekpere ya edepụtara gbasara udo
Next Post → Post ozo:Ozi sitere n’aka Chineke bu Nna n’onwa Oktoba 4, 2020